Isikhunta ku-clitoris | Thola ku-Inthanethi 🥇 Ingosi Yabesifazane
Namuhla sifuna ukukhuluma ngesikhunta sowesifazane sangasese, ngoba ubusibuza ngalokhu isikhunta ku-clitoris kanye nezinye izinhlobo zokudlondlobala kwamagciwane. Ngakho-ke, sizokuxazulula ukuthi bayini, sibaphathe kanjani nokuthi ungakugwema kanjani.
Kunezizathu ezingaphezu kwesisodwa zokuthi kungani ungazizwa ubomvu, ukulunywa, ukulunywa ngisho nokushiswa endaweni yangasese. Kungahle kube yisifo esithathelwana ngocansi noma ukucaphuka okuncane, njengokungezwani nezembatho zangaphansi noma ijeli eliseduze elisetshenzisiwe. Kodwa-ke, umsuka ojwayelekile kakhulu wokugwaza uvame ukubangelwa isikhunta namagciwane.
Noma ngabe yisiphi isizathu, nganoma yiluphi ushintsho ezitshalweni zakho zesitho sangasese sowesifazane, kufanele ubone udokotela wakho noma udokotela wezifo zabesifazane ukuze ukwazi ukuthola isizathu bese ubeka isisombululo esiseduze. Noma kunjalo, kungenzeka kube yiCandidiasis - ukutheleleka okubangelwa ukwanda kwamaCandida Albicans - okuxazululwa ngamakhilimu we-intravaginal noma ama-ovules.
Kungani kuvela amakhowe
Ingabe kukhona isikhunta ku-clitoris?
Ungayiphatha kanjani isikhunta
Ungakugwema kanjani ukuwela kuma-candidiasis
Lapho sizwa ngesikhunta, siqala ukusaba ekuqaleni. Kepha Ubuwazi ukuthi ngaphansi kwezimo ezijwayelekile kukhona isikhunta ku-clitoris, ku-labia majora ne-labia nasegabheni?
Izimbali zesitho sangasese sowesifazane zakhiwa lezi. I-microorganism eyaziwa kakhulu yisikhunta seCandida Albicans phambilini esabizwa ngegama. Lapho kunokukhula ngokweqile, kuyakuba lapho siyozizwa ziluma kuyo yonke indawo. Lapho-ke isikhunta sikhulu kakhulu (ngezizathu esizosichaza manje) kuzoba sengathi sinesikhunta ku-clitoris, ezindebeni nasezindaweni ezizungezile.
Njengoba kungukutheleleka okungaba nakho abesifazane nabesilisa, kungadluliselwa ngocansi olungavikelekile. Kepha Akusona isifo esithathelwana ngocansi.
Ngaphezu kwalokho, isikhunta sizovela lapho ukuvikela kohlelo lwethu kuphansi. Futhi, ngaphezu kwakho konke, lapho sithatha ama-antibiotic (wohlobo lwe-amooticillin). Uma kwenzeka udla amaphilisi okulwa namagciwane, buza usokhemisi wakho nge-probiotic egcina izimbali zangasese zilungile.
Lapho kuvela i-candidiasis, kuba lula kakhulu ukuthi iphinde ivele.
Ngaphambi kombuzo ophindaphindwayo wokuthi kukhona noma cha isikhunta ku-clitoris¸ Sikwenza kucace ukuthi isikhunta asikho kwi-clitoris kanjalo, kodwa kuyo yonke indawo yesitho sangasese sowesifazane nezindawo ezizungezile. Kepha kuyinto eyejwayelekile ukuthi uzizwe inyantisa endaweni yonke. Uma i-clitoris yakho ibuhlungu, ungahle uzilimaze ngenkathi wenza ucansi. Hlola indawo kahle nesibuko, futhi uqiniseke ukuthi awunalutho. Uma igxwala kuyo yonke indawo futhi ibomvu, kungenzeka kakhulu ukuba isikhunta.
Ngakho-ke, uma kubuhlungu kuphela noma kubambe i-clitoris yakho, kungaba yini? Zingaba ama-microcracks ngenxa yesikena esingenandaba noma isikhonkwane esithile.
Kungenzeka ukuthi i-herpes eyaziwa ngokuthi yi-herpes isabalale kwi-clitoris, yize ingekho kaningi.
Ngama-candidiasis, lezi zimpawu ziyavela kwabesifazane:
Ukushiswa nokulunywa kwe-labia majora, encane, i-clitoris.
Ukucasuka esithweni sangasese.
Ukutsha lapho uchama.
Ukushisa ngenkathi wenza ucansi.
I-Vaginal mucosa imhlophe kunokwejwayelekile ngezihlakala.
Uma unolunye lwalezi zimpawu, amathuba uwukuthi unayo i-candidiasis. Iya ku-gynecologist yakho ukwenza izivivinyo ezifanele.
Ukwelapha isikhunta akuwona umsebenzi onzima, kodwa kuyacasula, ngoba izimpawu azimnandi, futhi isifo esivame kakhulu kwabesifazane. Uma usuvele wazi ukuthi unesikhunta, iya ekhemisi bese ucela ukhilimu naye nguthombazole, isithako esisebenzayo esidingekayo ekuqedeni okweqile kwaleli bhakteriya. Bangakunika yona ngo-ukhilimu noma kuma-ovules we-intravaginal.
Vele, ungazama nokwelapha i-candidiasis ngamakhambi asekhaya. Kanjani? Siyakutshela.
Amafutha kakhukhunathi uthanda amasosha omzimba, ngakho-ke kuzosenza sizivikele kakhulu.
Garlic Kuyasiza kakhulu ukulawula izimpawu zokutheleleka. Uma ichotshoziwe futhi inyikinyekile ngamanzi, ukugeza kungenziwa kwekhampasi futhi kuzolungisa ukudonsa.
Aloe Vera Ilawula i-pH yesitho sangasese sowesifazane futhi igcoba ukuvuvukala. Kunamagiya athile endawo yesitho sangasese. Uma unesitshalo se-Aloe Vera, ungazenza ngokwakho.
Uma okufunayo vimbela ama-candidiasis ukuthi abuye, khona-ke sizofanela sithathe izinyathelo zokuvimbela. Ukuze wenze lokhu, qaphela lezi zeluleko:
Vikela ukudla okunoshukela. Musa ukuthatha ukudla oku-ultraprocessed and noshukela. Awekho ama-pastry ezimboni noma ushokoledi. Yidla ukudla okunempilo nokunempilo okulinganiselwe okusekwe inyama, izithelo nemifino. Lokhu kuzokusiza ukuthi ungaweli kuma-candidiasis njengoba ushukela unyusa amagciwane.
Phakathi kwezeluleko zasekhaya, okungcono kakhulu kuhlale kunjalo landela ukuhlanzeka komuntu siqu. Ngakolunye uhlangothi, kungcono kakhulu ukugwema i-lycra nezingubo zangaphansi ezincanyana, ukotini ube ngcono kakhulu. Iseluleko esifanayo siyasebenza kumabhulukwe: amabhulukwe aqine kakhulu azobangela ukuduma. Lokhu akusho ukuthi awukwazi ukugqoka izingubo zangaphansi eziqinile (ezi-sexy) ngezikhathi ezithile. Okubi kakhulu, kufanele uyihlobise ngezingubo ezintsha nezintsha.
El ukucindezeleka Akuyona indidane yalolu hlobo lwezifo, ngakho-ke zama ukwenza umsebenzi othile okhiqiza ukuthula: kungaba yithi yoga, izindiza zokudlala izindiza, ukuphumula, umdlalo othile. Thatha izinto ngokuthula ngokwengqondo nangokomzimba wakho.
Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe abengeziwe batusa ukusetshenziswa kwe indebe yesitho sangasese, njengoba i-silicone yayo yemvelo engagcini amagciwane noma ingenwa yigazi, okwenza ihlanzeke kakhudlwana.
Kuze kube manje okuthunyelwe namuhla ukuxazulula ukungabaza kwakho ngesikhunta ku-clitoris, ku-labia majora ne-labia minora. Uma unemibuzo mayelana nalolu daba, kufanele uthintane nodokotela wakho bese udlulisela kudokotela wakho we-gynecologist. Akufanele wesabe noma ube namahloni, ngoba ukutheleleka esithweni sangasese akuyona into onamahloni ngayo. Ngaphezu kwalokho, kungcono kakhulu ukuhamba nesikhathi ukuze singabi isifo esibi kakhulu. Ngokushesha lapho uqala khona, maduze nje uzoqeda ukulungiswa kanye nokuvutha. Uhlolo lwe-gynecological kufanele lwenziwe njalo ngonyaka noma lu-bi-ngonyaka kusukela eminyakeni eyi-18 noma kusukela eminyakeni lapho uya ocansini okokuqala.
Allergies kubhaka nama-confectioners
Ukuhlolwa kwe-Loop: kuyenzelwe ini?
I-Nystagmus: izimbangela nokwelashwa -. .
Isandiso esandisiwe: izimpawu nokwelashwa
Izinhlobo zamavithamini ancibilikayo amafutha - Izinzuzo zokuzithatha
Izinkinga ezinokwenzeka zemithambo ye-varicose -. .
Izinganekwane mayelana ne-polycystic ovary syndrome